Great isi adịghị eme ya niile na ha onwe ha - News Ọchịchị
Great isi adịghị eme ya niile na ha onwe ha
Isiokwu a na-akpọ “Great isi adịghị eme ya niile na ha onwe ha - otú ihe mere akwụ ha nke ukwuu?” e dere site Stefan Stern, n'ihi na theguardian.com on Monday 21 December 2015 13.21 UTC
Onye bụ onye na-elekọta clattering Virgin ụgbọ okporo? Ọ bụghị Sir Richard Branson. Ọ na-agaghị mere na ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụ ijiji ụgbọelu ma ọ bụ flicks mgba ọkụ on your USB TV ma ọ bụ anoghi n'ulo oba ego na gị Virgin akaụntụ. Ma, jụọ ọ bụla punter onye "na-agba" ụlọ ọrụ na ị maara ihe azịza ga-: na grinning, bearded bloke na a quirky i papuas ma ọ bụ fancy-uwe ekike.
Anyị niile bụ complicit, perpetuating echiche ụgha nke solo àgwà n'ụzọ ụfọdụ ijikwa akụkụ nile nke a ka nnọọ ọrụ. Financial nnyocha, ọmụmụ ha, oke n'akụ, ọrụ, ndi oru nta akuko - na anyị fixate on njirimara nke CEO. "Enwere Marc Bolland atụgharị Marks & Spencer gburugburu?"Anyị na-arịọ. "Ga Paul Polman ịgbanwe Unilever?"Ndị a bụ n'ezie nnọọ ezi uche ajụjụ.
oké ụgwọ ọrụ na n'elu, pụta ìhè ọzọ urua site a akụkọ si Chartered Institute of Personnel na Development (CIPD), Ntụle echiche na CEOs bụ "ndị ọzọ", a izu iche. Nke a bụ adịkarịghị ezi. N'ihi na ọ bụla ahụkebe, chụpụrụ ndú ndị na-enyere weta nnukwu mgbanwe, e nwere ọtụtụ ndị nkịtị ọchịchị na-bureaucrats ịbụ ugwo kediegwu ụgwọ ọnwa. E nwere abụghị ihe ihere ịbụ a ezi nchịkwa ma ọ bụ bureaucrat. Abụọ dị anyị mkpa. Ma mgbe ha pụrụ inweta ihe gigantic ụgwọ nchịkọta, ha ga-abụchaghị riteworo n'ụgwọ ha.
Related: Akụ na ụba 'creators' na-ezu ihe anyị kacha arụpụta ndị | George Monbiot
The results nke CIPD nnyocha e mere gosiri otú jọgburu ọ pụrụ ịbụ akwụ bosses ukwuu karịa mmadụ nile ọzọ. Isii nke 10 ọrụ kwuru na ha nwere mmetụta demotivated site ọgụgụ ka ọdịiche na-akwụ; 70% kwuru Executive, ụgwọ ọnwa kwa elu n'ozuzu, ọ bụ ezie na naanị 44% kwuru na onye isi na ha akpan akpan azụmahịa nọ na-enweta ukwuu; ihe karịrị ọkara kwuru na azụmahịa aha ọma a na-emerụ ya ngafe.
Echiche ụgha nke na-edu ndú na-akwagide na-ewu ewu echiche banyere ụwa nke egwuregwu. Obi abụọ adịghị ya isi eme ihe. More ma ọ bụ obere otu Chelsea egwuregwu ndị na ndibọhọ Premiership ikpeazụ oge imewo dara ada n'ụzọ a oge. Na ihe kacha eme nke a ida yiri ka a ogbenye àgwà n'etiti ndị squad, iwe na ọ na eccentric na mgbe ụfọdụ wetara omume nke ha ugbu a Sacked onyeisi, Jose Mourinho.
Ma Mourinho o doro anya na ihe kwekọrọ onwe ya n'akụkọ ifo, ikwere na mama na ọ bụ a ka elu na n'ezie-adịghị agha agha "pụrụ iche otu". Sports-azụ, Otú ọ dị achị, Otú ọ dị inspirational, kwesịrị icheta na ọ bụ egwuregwu na pitch na-emeri ma ọ bụ ida ọkụ. N'ihi na ihe niile na TV ese foto anọgide ofu na dugout ebe ndị na-elekọta anọdụ, na mbugharị na weghara ọ bụla tuwichi nke mmetụta uche na mmeghachi omume, Player na-arụ ọrụ.
Gịnị na-eme ezi ndị ndu ime? Ha na-ego ruru eru ndị mmadụ, ka ha ga na-arụ ọrụ ha. Ha ike a ohere nke ha na-arụ ọrụ nwere ike too nke ọma. Ha nyefee ndị ọzọ ka o kwere mee. Ha itinye uche ha ume na-na-na nnukwu mkpebi ziri ezi. Nke a adịghị mfe na kwesịrị akwụmụgwọ. Ma otú ihe?
FTSE 100 ụlọ ọrụ, na ha PR ndị ndụmọdụ, mgbe ụfọdụ na-ekwu na "gbakwuru" a big ụlọ ọrụ bụ a nnukwu ọrụ, na n'onwe ya di nnukwu ụgwọ. Ma, dị ka Sir Philip Hampton, a seasoned azụmahịa na ogugu ma na onyeisi oche nke pharma ibu GlaxoSmithKline, gwara High Ṅaa Centre afọ a na bigness adịchaghị enye echiche na CEO kwesịrị a nnukwu ụgwọ ọrụ. "The ibu usoro, ndị ọzọ usoro adabere, kama onye na elu nke na ọ,"Ka o kwuru.
Ọ dịghị onye dị oké mkpa. Great isi mgbe ụfọdụ nweta ihe dị ịrịba ama ihe, ma kwesị ha (ego) ịga nke ọma. Ma ha fọrọ nke nta mgbe nweta ihe ndị a na ha onwe ha. Steve Jobs, bụ ike o ji Apple, bụghị a technologist. Sir Alex Ferguson dịghị mgbe gbatara a mgbaru ọsọ Manchester United.
Bertolt Brecht, ya uri Ajụjụ a jụrụ site a na-agụ Ọrụ, aka ụfọdụ nke myths nke oké akụkọ ihe mere eme na ọnụ ọgụgụ n'ụzọ dị otú a:
"The nwa Alexander meriri India.
Na ya onwe ya?
Caesar meriri ndị Gauls.
Ndi enye ọbụna nwere a na-esi nri na ya?
Philip nke Spain bere ákwá mgbe ya Armada gbadara.
Ka onye ọ bụla ọzọ ákwá?
Frederick Onye Ukwu merie ndị afọ asaa War.
Olee onye ọzọ meriri ya?
Na bụla na peeji nke a mmeri.
Ònye ka esie ndị Izrel n'ịgba oriri?"
Anyị niile bụ a ọnụ. Ahụ na-agụnye onye isi. Ha we kwesịrị ka ụgwọ ọnwa karịrị ihe ndị ọzọ anyị. Ma, n'ezie, abụghị nke ukwuu karị.
← M nwere mmekọahụ ruo ihe karịrị 10 afọ New mkpụrụ ndụ ihe nketa tiori nwere ike kpuchie eme ka a ghọta ọgụgụ isi mmadụ →